Mbatatisi dziri kudhura muKazakhstan - "Potato System" magazini
Gurukota rezvekurima, Saparkhan Omarov akataura nezve zvikonzero zvekukwira kwemitengo yechikafu muKazakhstan, Tengrinews.kz inoshuma.
Pavaibvunza mibvunzo kumutungamiriri weBazi rezvekurima, vatapi venhau vakaona kuti mitengo mumisika iri kukura zuva nezuva: mbatatisi kubva kuKyrgyzstan dzinotengeswa mazana mana nemazana mashanu ezviuru zvemazana.
“Munofunga kuti muKazakhstan mune ngozi here nezvekudya? Zvino vedu, vekumba, vari pamashefu? - Saparkhan Omarov akabvunzwa.
“Handifunge kuti nhasi kune njodzi yekuchengetedza chikafu muKazakhstan nekuda kwekuti nhasi zvigadzirwa zveimwe nyika zvinotengeswa zvishoma pamatafura edu. Nezve mbatatisi, ndinoda kutaura kuti kudyiwa kwembatatisi muKazakhstan kuri mamirioni matatu nemakumi matatu nematatu zviuru mazana matatu. Tiri kugadzira matani mamirioni. Kupa mbatatisi kuri pa3 muzana, ”akadaro Omarov.
Akataura kuti kune "mwaka wemwaka" pamisika, saka zvakawanda zvigadzirwa zvekunze zvinoratidzwa.
“Mbatatisi dzedu dzekuKazakhstani dzave kuibva, zvinoitwa nenzira iyi gore rega rega, dzinotengwa kubva kuUzbekistan. Kana mwaka wekusiya uri muUzbekistan, matapiri edu anotumirwa kunze uko, uye kana tave nemwaka usiri-mwaka, mbatatisi dzeUzbek dzinouya kwatiri. Tine edu matapiri madiki munzira, mushure menguva yakati kuti anozoonekwa, ”akadaro Saparkhan Omarov.
Vatori venhau vakabvunza gurukota kuti vapindure pavakapedzisira kushanyira musika uye kuti vane simba here pamamiriro emutengo.
“Ndinowanzoenda kuzvitoro kana kumisika nemusi weSvondo kana ndine zuva rekuzorora. Pamusoro pezvo, tine dhipatimendi rinoongorora mitengo muzvitoro nemisika mazuva ese, ”Omarov akapindura.
Pamusoro pezvo, mukuru webazi rezvekurima akabvunzwa kana achifunga kuti mutengo we430 tenge pakirogiramu imwe yematapiri wakaringana.
“Mazuva ano kune matapiri akakwana munyika. Kugadzirwa kwembatatisi kwakakwana. Uye mangwana, kuwanda kwekuwedzeredza kunogona kukanganisa zvakare chokwadi chekuti varimi vekurima havazokwanise kutengesa mbatatisi pamutengo kunyangwe. Izvi zvakaitika kare. Naizvozvo, ini handingakurudziri kuburitsa zvinopfuura zvazvinofanirwa kuve.
Kana tikataura nezvemutengo, nhasi vagadziri vedu vanotengesa vakananga kubva kumatura avo nemutengo we200 tenge, mazana maviri tenge asara atove markups evamiririri kana iwo mamwe masupamaketi. Kugadzirisa mamiriro ezvinhu aya, Ministry of Trade and Integration parizvino iri kuita chirongwa chekuvaka nzvimbo dzekugovera zvizere uye nzvimbo dzekugovera zvinhu. Ndinofunga kuti izvi zvichatibatsira kugadzirisa nyaya yevarevereri, ”akadaro.
Akawedzera kuti gore rapfuura, chirongwa chekuyedza-chekuita chakaitwa munzvimbo nhatu dzekumaodzanyemba, nevarairidzi vachibvumirana zvakananga nezvitoro.
“Chirongwa ichi chakazviratidza mushe, saka ndinofunga chirongwa ichi chinoda kumbofambiswa mberi. Matunhu ese ane mari yekusimudzira, izvozvi hurumende yafunga kuti mari yekutenga yemari yekusimudzira ichawedzerwa kusvika makumi mashanu emabhiriyoni tenge. Uye kuburikidza nemari iyi yekudzikamisa tichagadzirisa mutengo, ”akadaro Omarov.
Tags: Kazakhstanmitengo mbatatisi
Vamiriri vedunhu reMoscow vanoratidzira mhedzisiro yemishonga yesora kurwisa hogweed